Kikwete oo ku baaqay in jaan-gooyo sare loo sameeyo madaxda - Sabahionline.com
Agoosto 05, 2012
Madaxeynaha Tansaaniya Jakaya Kikwete ayaa shaaca ka qaaday qorshihiisa ku aaddan in uu saraakiisha dowladda ku qiimeeyo tayada sare ee adeegyada ay bixiyaan, sidaana waxa Axaddii (5-tii August) sheegay Daily News-ka Tansaaniya.
Kikwete ayaa shirwayne caalami ah ka ammaanay furfurnaanta
Madaxweynaha Tansaaniya oo billaabay mashruuc caawimaadda abaarta ku aaddan
Kikwete waxa uu sheegay in dadaalka joogtada ah ee xukuumaddu sameeysay uu gayaysiiyay Tansaaniya in ay xaqiijiso koro dhaqaale -- waxa kor u kacay kharashaadka la galiyo adeegyada bulshada, waxa kor u kacay wax dhoofinta iyo kaydka lacagaha qalaad, waxa kor u kacay maal-gashiga shisheeye ee tooska ah, waxaana la xakameeyay sicir-bararkii. Si kastaba ha ahaatee, horumarkaa oo jira, ayaa haddana saboolnimadii wali wax laga qaban la'yahay, ayuu yiri.
"Aniga aragtidayda, jawaabta dhibaatadasi waa xoojinta hannaanka wax-qabad ee dawladda iyo kor u qaaddidda wax-qabadka dhinacyada ay ka mid yihiin ganacsiga gaarka ah, beeralayda yaryar iyo shaqaalaha," ayuu yiri Kikwete. "Waxa aannu awood u yeelan doonnaa in aannu si wanaagsan kaga dhabayno rajooyin badan oo aan ku qeexnay waraaqaha iyo dokumentiga oo aan u baddalno natiijooyin la taaban karo kuwaa oo baddali doona nolasha dadkeena iyo qarankeena."
Kikwete ayaa hadalladan ka jeediyay xilli ay xubno ka tirsan xukuumadda u ambabaxayeen sidii ay u soo baran lahaayeen sida kor loogu qaado horumarinta adeegyada, kaas oo uu soo qaban-qaabiyay madaxa Waaxda Shaqada Maamulka iyo Adeegyada ee xafiiska Ra'iisul-wasaaraha Malaysiya. Jaan-gooyada sare ee shaqadu waxa ay fure u noqon doontaa sidii loo meel-marin lahaa Himilada Tansaaniya ee 2025-ka, ayuu yiri Kikwete.